करियरकै लागी लक्ष्मीले दिईन् जीवनलाई डिर्भोस र गरिन् गर्भपतन पनि (भिडियोसहित) – Dainik Samchar
March 21, 2021 316
एकअर्कालाई साँचो माया गर्ने र जनमजनम संगै रहने बाचा गरेर परिवार र समाजको पनि परवाह नगरी यी दुईले एकअर्कालाई दिएको साथ, सहयोग र सम्मान सबै चक्नाचुर भएको छ । आफुलाई सबै भन्दा धेरै यदि कसैले बुझ्दछ भने त्यो हो जीवन भनेर नथाक्ने लक्ष्मीले आज उनै बुझ्नै जीवनलाई डिर्भोस दिएकी छन् । यति मात्रै नभई कलाकार लक्ष्मीले उनले आफ्नो पेटमा रहेको बच्चाको समेत गर्भपतन गराएकी छन् । लक्ष्मीले यो सबै केवल करियरकैलागी भन्दै गरेकी हुन् ।
करियरकैलागी लक्ष्मीले जीवनलाई डिर्भोस दिनु र गर्भपतनसम्म गर्नु वास्तवमा एउटा म्युजिक भिडियोको कथाकोलागी मात्र हो न कि उनको आफ्नो वास्तविक जीवनमा । वास्तविक जीवनमा त लक्ष्मीले जीवनलाई माया गर्छिन् भन्ने त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । र जीवनले पनि लक्ष्मीलाई । यी दुईको माया एकअर्काकोलागी वास्तविक जीवनमा निकै नै अनमोल छ । २१ औं शताब्दिको समाज रुपान्तरणकोलागी यी दुईको बलिदान अन्य माया गर्ने जोडी जस्तै अमर रहनेछ ।
जाहाँसम्म डिर्भोस र गर्भपतनको कुरा छ त्यो केवल ‘तिमी आउन सक्छौ’ बोलको म्युजिक भिडियोकोलागी मात्र हो । उक्त म्युजिक भिडियोमा रियल लाईभकै यी जोडिले रिल लाईभमा अभिनय गरेका छन् । सो भिडियोमा लक्ष्मी र जीवनबीचको अनबन्धका कारण उनीहरु अलग भएको देखाईएको छ भने उनीहरुको सम्बन्ध करियरकैलागी अलग भएको भन्ने भावमा उक्त म्युजिक भिडियो बनाईएको छ । सोही भिडियोमा करियरकैलागी लक्ष्मीले गर्भपतन गराएको देखार्ईएको छ ।
एकअर्कामा माया हुँदाहुँदै पनि जब कुरा उदाउँदै गरेको करियरको आउँछ तब धेरैले यस्तो निर्णय गरेकै कारण एकअर्कादेखि अलग हुनु परेको वास्तविक घटनालाई भिडियो मार्फत चित्रण गर्न खोजिएको छ । रजिना रिमालेको स्वरमा रहेको ‘तिमी आउन सक्छौ’ बोलको गीतमा निकै मार्मिक शब्दहरु रहेका छन् भने गीतको भिडियो पनि अत्ति नै उत्कृष्ट बनाईएको छ ।
Prevअधुरै रहयो हजारौ बि’रामीको सेवा गर्ने सपना !
Nextएक्कासी ४० प्रतिशत ले घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मूल्य, हेर्नुहोस् कति पुग्यो ?
१० जना हिरोहरुसँग सुत्दै हिड्ने केटी हो रेखा थापा : शिल्पा (4851)